Showing २१-३० of ४,७५२ items.
कोरोनाको बेला सुनमा लगानी, तोलामा तोला उपहार दिँदै गृह प्रा. ली
धरान : धरान -३ कैलाश पथमा संचालनमा आएको स्वर्ण गृह प्रा. लीले ग्राहकहरुलाई सुनका गहनाहरु तोलामा खरिद गर्दा खरिद गरे बराबरको चाँदी सितैमा दिने बताएको छ । कोरोना महामारीले देशकै अर्थतन्त्र थङथिलो भएको अवस्थामा पनि धरानको माछाभौडीमा एक सुन पसल संचालनमा आएको छ । सो पसल संचालनमा ल्याएको उपलक्ष्यमा ग्राहकहरुलाई बोनस स्वरुप तोलामा तोला उपहार दिने घोषणा गरेको गृह प्रा .लीका संचालक निश्चल पराजुलीले जानकारी दिए । प्रेम कार्की र पराजुलीको संयुक्त लगानीमा संचालनमा आएको सो गृह प्रा लीमा खरिद गरे
सव स्टेशनको काम कछुवा गतिमा
यासोक । पाँचथरको तुम्वेवा गाउँपालिका १ मा निर्माणधिन सव स्टेसनको काम कछुवाको गतिमा अघि बढेको छ । नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा ३३ केभिएको सव स्टेशनको काम कछुवा गतिमा अघि बढेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सामुदायिक ग्रामिण विद्युतिकरण विभागले योजनाको काम गर्दै आएको छ । २०७६ जेठ ६ गते सम्झैता भएकाे सव स्टेशन निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले २०७७ मंसिर ९ गते योजनाको शिलान्यास गरेका थिए ।सरकारले १४ करोड ७ लाख १८ हजारमा वाइवा इन्फ्राटेक प्रालि काठमाण्डौंले ठेक्का दिएको थियो । ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले दुई वर्ष भित्र योजना पूरा गर्ने गरी सम्
सुजुकीमा दशैं उपहार योजना
धरान । सुजुकी मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक बिक्रेता भिजी अटोमोबाइल्सले सुजुकी ब्राण्डका मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा दशैं अफर ल्याएको छ । दशैंतिहारलाई लक्षित गर्दै ‘दशैं आयो, उमङ्ग छायो, क्यासब्याकको साथै बम्पर पायो’ नाराका साथ उपहार योजना ल्याएको हो । यस उपहार योजना सुजुकीका सबै ब्राण्डका मोटरसाइकल र स्कुटरमा लागू हुने जनाइएको छ । सुजुकीका कुनै पनि ब्राण्डका मोटरसाइकल तथा स्कुटरको खरिदमा १० हजार रुपैयाँ क्यासब्याक पाउनुका साथै हरेक दुई सातामा हुने बम्पर पुरस्कारका रूपमा सुजुकी इन्ट्रुडर बाइक पाइने जनाइएको छ । साथै एक वर्षसम्म रोड ट्याक्स, फाइनान्स र एक्सचेन्जको सुविधा पनि रहेको जनाइएको छ ।
प्रशारण लाइनको टावर ढलेपछि म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतमा सञ्चालित चार जलविद्युत् आयोजनाका उत्पादन बन्द भएका छन् । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–८ चुवामा प्रसारण लाइनको टावर ढालेर म्याग्दीका दुई, पर्वत र मुस्ताङका एक/एक आयोजनाको ७०।६ मेगावाट विद्युत् प्रसारण प्रणालीबाट विच्छेद भएको हो । मोदीखोला–१ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत गृहदेखि मोदी सबस्टेशन जोड्ने १३२ केभी क्षमताको प्रशारण लाइनको चार नम्बरको टावर गत शुक्रबार राति बाढीपहिराका कारण ढलेको थियो । दश मेगावाट क्षमताको मोदी–१ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक युनाइटेड मोदीका प्रबन्ध निर्देशक उपेन्द्र गौतमले मोदी सबस्टेशन भएर रा